Ciidanka Ammaanka Oo Howlgallo Dad Lagu Qaqabtay Ka Sameeyey Muqdisho
Ciidamada amaanka ayaa xalay howlgal ay ka sameeyeen Degmada Xamar Weyne ee gobolka Banaadir waxa ay kusoo qabteen labo nin oo hubeesan, kuwaa oo ku labisnaa dareeska Ciidanka Milatariga Soomaaliya.
Ragan hubeesan ee Ciidamada amaanka qabteen ayaa la sheegay in dhibaato ku hayeen shacabka ku dhaqan Degmada Xamar Weyne, waxaana ragan oo ahaa burcad ay dhac u geesteen dad kala duwan oo kunool Degmada Xamar Weyne
Taliyaha Saldhiga Booliska ee Degmada Xamar Weyne, Xasan Duulane Xersi ayaa Warbaahinta u sheegay in burcadan hubeesan lasoo qabtay iyaga oo dhac ka waday Degmada Xamar Weyne, waxa uuna intaa raaciyay in ragaasi laga helay moobeelo iyo dahab ay soo dhaceen.
Waxa uu sheegay Taliyaha in ragan burcada ah lasoo qabtay mid kamid ah uu katirsan yahay ciidanka Milatariga Soomaaliya halka ninka kalana uu ahaa nin shacab burcad ah oo wada shaqeyn kala dhaxeysay askariga Milatariga.
Labadan nin iyo hubkii ay wateen ayaa lagu xiray saldhiga Degmada Xamar Weyne, waxaana taliyaha saldhiga Degmada Xamar Weyne sheegay in ragaasi burcada ah la horgeyn doono maxkamada si cadaalada loo marsiiyo.
Magaalada Muqdisho waxaa ka howlgala Burcad mararka qaarkood soo xirta dareeska ciidanka dowlada kuwaa oo dhibaato ku haya dadka shacabka ah, waxa ayna burcadan xiliyada qaark dadka ku dhacaan gawaari iyo mooto bajaaj.